सबै मान्छे के ETF थाहा छैन? यो के हो? यो संक्षिप्त विनिमय कारोबार कोष लागि खडा छ। अब यी सम्पत्तिहरू को लोकप्रियता धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो लाभ मूल्याङ्कन गर्न समय थियो भनेर वृद्धि भएको छ। यो घटना को "युवा" को दृश्य मा, यो आधुनिक बजार सम्बन्ध मा एक अचम्मको सफलता हो।
ETF - यो अर्थ के हो?
ETF - विनिमय-कारोबार सम्पत्ति एक पोर्टफोलियो समावेश जो लगानी कोष, छन्। यी स्टक, बन्धन र मुद्रा जोडी को एक किसिम समावेश गर्नुहोस्। र यो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न निवेशक छ। यो सम्पत्ति खरीद आफ्नो पैसा लगानी गर्न निर्णय गरेको छ, मानव लागत कम गर्छ। वास्तवमा केही व्यापार साधन एक टोकरी व्यापार, एक ETF संग संचालन मा लगी भएको छ जसले एक व्यापारी।
कसरी सिर्जना ETF थियो?
पहिलो पटक, यी धन 20 औं शताब्दीको लेट eighties मा सुरु भयो। यस समयमा, पहिलो ETF समकक्षों स्थापित गरिएको छ। तिनीहरू कारोबार छन् विनिमय-कारोबार रकम थिए अमेरिकी स्टक एक्सचेन्ज र AMEX। साथै, ETF संग सञ्चालनको फिलाडेल्फिया शेयर आदानप्रदान उपलब्ध थिए।
चाँडै तथापि, यी साधन मा व्यापार रद्द गरिएको छ। यस पछि यो भयो कमोडिटी एक्सचेन्ज शिकागो ETF-विनिमय-कारोबार रकम sued। दावी को सार कि ETF को नियामक पालना गर्दैन थियो। तर नयाँ सुविधाहरू रुचि खेलाडीहरू छाडेनन्।
तसर्थ, विचार यसको सान्दर्भिकता हराएको छ, र सराहना थियो। त्यसपछि मा शेयर बजार टोरन्टो, व्यापार गर्न नयाँ वित्तीय साधन। प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक लगानीकर्ताले को ध्यान लागि competed छन्। अन्य देशहरूमा शेयर बजार, नियमहरूमा अमेरिकी नियामक को आवश्यकताहरू पूरा गर्न विकसित गरिएको छ।
सबै भन्दा लोकप्रिय कोष जासूस भयो। यो एउटा depositary रसिद थियो स्टक सूचकांक SP500। साथै, खेलाडीको लोकप्रियता को mdy प्रयोग गर्न थाले। यो पूँजीकरण को एक औसत आकार संग कम्पनीहरु को साझा हुन्छन्।
यो भविष्यमा विकासको लागि कस्तो अर्थ राख्छ? बजार सहभागीहरू सकारात्मक विनिमय-कारोबार रकम को विचार गर्न प्रतिक्रिया। त्यसको केही समयपछि, अमेरिकी स्टक एक्सचेन्ज मा विनिमय कारोबार धन व्यापार मौका छ। तिनीहरूले SP500 सूचकांक समावेश गरिएको छ कि अर्थव्यवस्था को प्रत्येक क्षेत्र को लागि विशेष बनाइयो। यसरी यो9नयाँ ETF गठन भएको थियो। कोष सूचकांक DJ30 - यो सूची पछि DIA प्रविष्ट गर्नुभयो। QQQ, Nasdaq-100 डिजाइन - 1998 मा, त्यहाँ अर्को वित्तीय साधन हो।
एक ETF को सुविधाहरू के-के हुन्?
अन्य उपकरण नभई ETF-धन धेरै लाभ छ:
1 तिनीहरू देखि ETF खरीदार स्टक को एक पोर्टफोलियो को व्यवस्थापनका लागि भुक्तानी पर्दैन, निवेशक लागि पैसा बचत गर्नुहोस्। फलस्वरूप, निवेशक मालिक लाभ थप कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिन्छ।
2. एक निवेशक खरीद तयार एक पोर्टफोलियो मा निवेश। यसलाई उच्च लिक्विडिटी द्वारा विशेषता छन् जो सबै भन्दा राम्रो जमानत, समावेश छन्। यो निवेशक को जोखिम कम गर्छ।
3. खरीददारहरू एक लामो समय को लागि एक लाभ बनाउन आशा। निवेशक आवश्यक जटिल वित्तीय गणना सामना छैन। एक तयार ETF पोर्टफोलियो एक स्थिर आय किन्न र प्राप्त गर्न पर्याप्त। कुनै पनि समयमा बेच्न सक्छौं कि थप तरल सम्पत्ति।
ETF पनि रूस मा मामला छ। FinEx, 10 भन्दा बढी विभिन्न सूचकांक जमानत (ETF) को जारी गरेको छ जो - हाम्रो बजार मा जमानत केवल एक कम्पनी कारोबार भएको छ। कागजात सार्वजनिक 2013 को सुरुदेखि उपलब्ध छन् र शेयर बजार मा 1996 को रूसी व्यवस्था को नियम अधीनमा छन्।
आइरिस जारीकर्ता को जारी FinEx शारीरिक ब्याक कोष पीएलसी र कोष पीएलसी प्रदान गर्नुहोस्। प्रशासनिक कार्य एक ब्रिटिश कानुनी दर्ता छ जो FinEx पूंजी व्यवस्थापन LLP, प्रदर्शन गर्दै छन्। Supervisory नियन्त्रण र वित्तीय व्यवस्थापन, एक तथाकथित सूचीकरण एफएसए ब्रिटिश नियामक संलग्न गरिन्छ। रूसी संघ को क्षेत्र मा सहायक LLC "बेलायत FINEX-प्लस", केन्द्रीय बैंक को इजाजत र पूर्ण-fledged बजार सहभागी स्थिति छ जो को दर्ता बाहिर।
लेखापरीक्षक - बैंक न्यूयोर्क Mellon प्रशासनिक केन्द्र छ, र Pricewaterhouse-Coopers। बैंक न्यूयोर्क Mellon पनि depositary सेवाहरू प्रदान गर्दछ र पैसा स्टक बचाउँछ। घरेलू आपसी धन को रूप मा, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी कोष को सम्पत्तिबाट अलग छ। विनियमन र पर्यवेक्षण को कार्य आयरल्याण्ड को नेशनल बैंक द्वारा प्रदर्शन।
कागजात ईयू बजार भुक्तान धन को भाग रूपमा मास्को शेयर बजार मा ETF उपचार आयोजना गर्ने उद्देश्यका लागि क्रस-सूचीकरण प्रक्रिया दिइएको थियो। ETF लिक्विडिटी एक धेरै महत्वपूर्ण सुविधा हो। विशेष marketmeytinga सिस्टम बिक्री र खरिदका लागि विनिमय ग्लास मा मांग समर्थन गर्दछ। यो समस्या चिरपरिचित वित्तीय कम्पनीहरु समाधान गर्न कठिन काम, मुख्य रूसी बजार निर्माता जेन सडक वित्तीय लिमिटेड, Goldenberg Hehmeyer, Bluefin युरोप, को ETF काम। यो कस्तो अर्थ राख्छ? रूसी दलाल "Finam" को सहभागिता मार्फत यी निगमों रूसी बजार पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन्।
लगानीकर्ताले पनि कारण क्रस-सूचीकरण गर्न, मास्को शेयर बजार मा छ कि ETF को जानकारी हुनुपर्छ, र शेयर बजार युरोपेली र रूसी आवश्यकताहरु पारस्परिक रहेको छ। आज, खरीद कम्पनी FinEx धन देखि 13 प्रजातिका उपस्थिति पनि समावेश छ। एक ETF लगानी आपसी धन मा निवेश को कोष र यसको सुविधाहरू एक विस्तृत अध्ययन आवश्यक साथै।
तपाईं लगानी बारे जान्नु आवश्यक के
स्टक लगानी क्षेत्रमा कृत्रिम र शारीरिक छ जो एक प्रतिकृति सूचकांक, रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा छ। शारीरिक प्रतिकृति मान्छ को कोष वा साझेदारी को पोर्टफोलियो, वा आधारभूत पोर्टफोलियो रूपमा सम्पत्ति अन्य प्रकारको छ।
कृत्रिम प्रतिकृति को पोर्टफोलियो यस्तो विकल्प, फर्वाडहरु, वायदा रूपमा वित्तीय साधन को एक किसिम छ भन्ने हो। ETF-FinEx कम्पनी, सुन आधारित छ जो, उदाहरणका लागि, एक कृत्रिम, प्रयोग किनभने तिनीहरूले छ एक वायदा सम्झौता सुन। FinEx नगद र बराबर UCITS ETF र FinEx Tradable रूसी कर्पोरेट बांड UCITS ETF (RUB) जस्तै यस्तो सूचकांक धन ETF मिश्रित स्टक को संरचना छ। तिनीहरूले आधारभूत उपकरण र डेरिवेटिव जस्तै हुन्। एक निवेशक विशेष खरीद मा कारोबार गर्न धन को पूर्ण संरचना पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, र नियमित रूपमा प्रकाशित हुन।
विदेशी मुद्रा दावी
को मास्को स्टक एक्सचेन्ज मा सहभागिता व्यवस्थापन कम्पनी द्वारा रूसी rubles मा एक कागज नियुक्त गर्नु गर्न आवश्यकता पनि समावेश छ। ETF सम्पत्ति यूरो अमेरिकी डलर वा हिसाब गरिन्छ ब्रिटिश पाउण्ड। यसरी, बजार विनिमय दर पुन: गणनामा मुद्रा बजार मा डलर हुन्छ। यो घटना pluses र minuses दुवै छ। सकारात्मक पक्ष कारण आरक्षित मुद्राहरू को कम दर को रूप मा व्यक्त गर्न सकिन्छ रुबल र नकारात्मक पक्ष को अवमूल्यन गर्न आय को रूप मा नै प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। तथापि, मौद्रिक गतिशीलता राम्रो विकसित देशहरुमा छन् यूरो र डलर जस्ता मुद्राहरू लगातार दीर्घकालीन संभावनाहरु छ कि सुझाव। अन्य मौद्रिक इकाइहरूमा व्यापार को मामला मा, यो सम्भव छ र माथि उल्लेख गरिएको समस्या को उद्भव।
Royalmaxbrokers: चीन यसको अर्थव्यवस्था बढावा
साइबेरिया: ठाँउहरु। साइबेरिया यात्रा
AirDrop - यो के हो? AirDrop - प्रयोग कसरी गर्ने? AirDrop - कसरी सक्षम
जिम जाने: वजन लागि व्यायाम
सोफा "डल्फिन": कोणात्मक, सीधा। सोफा "डल्फिन": एक संयन्त्र
स्वादिष्ट नाश्ता - कड कलेजो र अन्डा संग स्यान्डविच